Home Wararka Dowladda Ingiriiska oo aargoosi u aragta xariga muwaadan u dhashay Ingiriiska oo...
Dowladda Ingiriiska oo aargoosi u aragta xariga muwaadan u dhashay Ingiriiska oo u xiran dowladda Farmaajo
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa amaratay in xabsiga dhexe ee Xamar lagu sii hayo Antony Thomas oo ah 48 sani jir u dhashay Boqortooyada Ingiriiska.
Antony Thomas ayaa Maxkamadda Gobolka Banaadir sida ay sheegay waxaa loo heystaa isku day qatar gelinta degenaanta guud iyo ku guul dareysiga sheegitaanka waxyaabaha qarxa, kuna eedeysan Qodobada 332-531 ee Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed.
Dowladda Ingiriiska ayaa u aragta aargoosi ay kula dhaqmeyso dowladda Soomaaliya kaddib markii ay si buuxda uga soo horjeesteen falkii ay dowladda Soomaaliya ku erisay wakiilkii Qaramada Midoobay Nicholas Haysom bishan Janaayo 01, 2019.
Safiirka Ingiriiska u farhiyo Soomaaliya ayaa maalmo ka hor u sheegay wasiirka arrimaha dibadda JFS in falalka guracan ee dowladda Soomaaliya aay kula kaceyso dowladda Ingiriiska aanan indhaha laga daboolan doonin.
Ciidamada Ammaanka ayaa Sabtidii lasoo dhaafay oo Taariikhdu ay aheyd 19-kii Bishaan waxay ay garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaaladda Muqdisho waxay ka qabteen Antony Thomas, islamarkaana loo gudbiyey qeybta Dambi baarista ee C.I.D.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar ayaa shaaca ka qaaday in ninkan uu gudaha Soomaaliya ka shaqeyenayey muddo.
Oomaar waxa uu sheegay in ninkan uu markii la qabanayey raaci alaha diyaaradda Ethiopian Airlines.